Vadare veParamende Vonyunyuta Nekunonoka Kuburitswa kwefiro yaVaMujuru
Dare reparamende neChina rakazeya nyaya yekufa kwegamba renyika Retired General Solomon Mujuru, avo vakashaya mushure mekutsvira mumba papurazi ravo kuBeatrice musi wa16 Gunyana.
Nhengo dzedare reparamende kubva kumapato matatu anoti Zanu PF neMDC dziri mbiri vakatenderana kuti mapurisa anofanira kutaurira nyika zvakabuda muongororo yavo yekuti chii chakaita kuti musoja akaita saVaMujuru afire murimi remoto asina kukwanisa kubuda.
VaTrevor Jones Saruwaka veMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai vakati mapurisa achaita kuti vanhu varambe vachifungira kuti VaMujuru vakafa zvisina tsarukano kana akaramba achinonoka kuburitsa zvavawana kusvika pari zvino.
Makurukota anoti VaPaddy Zhanda veZanu, mutevedzeri vemutungamiriri wehurumende VaArthur Mutambara, VaTangwara Matimba, VaEddie Cross naVaEric Matinenga veMDC-T, vakati firo yaVaMujuru yaiva isina kunaka uye yaifanira kunyatsoongororwa nechimbichimbi.
Mutauriri wemapurisa VaOliver Mandipaka vati havangatibatsire nezvenyaya iyi.
Retired Major Cairo Mhandu, vanowe nhengo yeZanu PF vachimirira Mazowe North muparamende vaudza Sandra Nyaira weStudio 7 kuti zvakabuda paongororo iyi zvinofanirwa kuburitswa kuitira kuti pasaita makuhwa pakufa kwaVaMujuru.
Nyanzvi munyaya dzemitemo uye vari sachigaro weNCA Professor Lovemore Madhuku vaudzawo Studio 7 kuti mapurisa anofanirwa kutaurira nyika kuti asvika papi neongororo yavo.